Côte d’Ivoire: Tatitra Tafaporitsaka sy Lazaina fa Mikasika Kolikoly, Navoaka Tety Anaty Aterineto ary Nitarika ho Amin’ny Fisamborana Mpanao Gazety Telo · Global Voices teny Malagasy
Théophile Kouamouo, iray amin'ireo bilaogera sangany mampiasa ny teny frantsay, ary mpitarika ny tetikasa Atrikasa Bilaogy mahazo famatsiana Rising Voices tao Abidjan Camps
Araka ny nambaran'ny bilaogin'ny ” Le Nouveau Courrier“, telo ireo mpanao gazety avy amin'ny gazety ivoariàna mpiseho isanandro no nosamborina hatramin'ny Talala 13 Jolay noho ny namoahany tatitra iray tafaporitsaka lazaina fa momba ny kolikoly mikasika ny fandraharahàna kakaô sy kafe ao Côte d'Ivoire.
Tamin'izay maraina izay, polisy nanao fanamiana sivily namita iraka nampanaovin'i Raymond Tchimou Fehou, lehiben'ny fampanoavana no tonga nisambotra an'ireo mpanao gazety telo – Saint Claver Oula, toniandahatsoratra, Stéphane Guédé mpamoaka lahatsoratra ary ny tale jeneraly Théophile Kouamouo – izay samy nentina hogadraina rehefa nandà tsy hanoro izay loharano nahazoany ny vaovao nandritra ny fitsidihana tampoka natao tao amin'ny biraon'ny Le Nouveau Courrier. Tamin'izay maraina izay ny “Le Nouveau Courrier” dia namoaka ny lahatsorany voalohany momba ny fanadihadiana fanodinkodinana vola nahavoarohirohy olona 30 misehatra ao anatin'ny indostrian'ny kakaô sy kafe (jereo ato ny lahatsoratra niaingàna, amin'ny teny frantsay), izay tokony naharitra herinandro manontolo teo ho eo. Araka ny “Le Nouveau Courrier”, tsy nitondra didy fisavàna ireo lazaina fa polisy ireo kanefa dia nanatontosa fisavàna tany anatin'ireo solosaina rehetra tao amin'ny biraon'ilay gazety, mba hahafahana mangihy ireo antontan-taratasy niandohan'ny fanadihadiana tokony havoaka ny andro manaraka an'izay. Nandritra ny fisavàna, nalaina ny solosaina iray ary nambanan'ny lehiben'ny polisy mpikaroka heloka bevava sy ireo polisy hafa niaraka taminy tamin'ny basy ny mpiasa tao an-toerana.
Miandry ny fotoana itondràna azy ireo hiatrika mpitsara sy ny fiampangàna ho “nangalatra antontan-taratasim-pitantanana” ireo mpanao gazety telo izay nanapitra ny alina roa tany amin'ny efitra fitazonan'ny polisy. Hatramin'ny fotoana nipoahan'ny vaovao momba ny nisamborana an-dry zareo omaly, betsaka ireo mpiaramiasa sy fikambanana no tonga nitsidika sy naneho ny fanohanana azy ireo, isan'ireny ny “Groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire” (fikambanan'ireo toniandahatsoratry ny gazety matihanina). Notsipihan'ny sasany tamin'ireo namana mpiaramiasa fa ny toko voalohany ao anatin'ny Fitsipi-pitondrantena ho an'ny Ivoariàna mpanao gazety, navoakan'ny Ministeran'ny Fifandraisana (jereo eto ny antontankevitra niaingàna, amin'ny teny frantsay) dia milaza fa “zon'ny mpanao gazety ny mahazo fiarovana ny/ireo loharanom-baovaony”.
Gazety vaovao mpiseho isanandro ny “Le Nouveau Courrier” izay nanambara fa volana roa latsaka talohan'izao no nanomboka ny fanontàny, ny 25 May 2010, ary tanjony ny hanolotra fomba fijery vaovao sy voalalina tsara momba ireo zavamisy amin'izao fotoana.
Ny tale jeneraly Théophile Kouamouo dia teratany Kameroney mizaka ny zom-pirenena frantsay ary iraka mpifandray teo aloha ho an'ny gazety frantsay mpiseho isanandro “Le Monde”. Efa ampolo taona mahery izy no nipetraka tao Abidjan, ary mpanao gazety nohajain'ny maro no sady mpampianatra tsy tapaka ny asa fanaovana gazety tao Côte d'Ivoire sy tany an-kafa. Izy koa dia iray amin'ireo bilaogera voalohany sy malaza ao amin'ny faritra Afrika miteny sy mampiasa ny teny frantsay, ary milaza ny tenany ho mpandraharaha ety anaty tranonkala. Iray tamin'ireo isan'ny fahombiazan'ny zavatra nataony tety anaty aterineto ny sehatra fanoratana bilaogy ivoariàna Ivoire-Blog. Farany nefa tsy ny maivana indrindra, niaraka tamin'i Nadine Tchaptchet-Kouamouo vadiny, izay mpanao gazety ihany koa, dia nahazo ny famatsiambola Rising Voices izy ho an'ny tetikasany Abidjan BlogCamps momba ny fanofanana hanoratra bilaogy ao Côte d'Ivoire.
Marobe ireo bilaogera sy mpanao gazety naneho ny fanohanany an'i Kouamouo sy ireo mbola tavela ao amin'ny tariky ny “Le Nouveau Courrier” tamin'ny alàlan'ny fanangonantsonia iray ety anaty aterineto itakiana ny famotsorana avy hatrany azy ireo, hatrany amin'ny Twitter sy vondrona Facebook iray izay toerana izaràn'izy ireo ny fanavaozambaovao momba ilay tranga.
Reporters Sans Frontières namoaka fanambaràna iray manao hoe :
an-taona maro ry zareo tsy mbola nahita mihitsy fomba tahaka izao nampiasain'ny manampahefana ao Côte d’Ivoire izao. Tsy mitombina ilay vesatra fiampangàna ho nangalatra. Tokony tsy ho esorina ao an-tsaina fa fotokevitra fototra ho an'ny asa fanaovana gazety ny fiarovana ny loharanombaovao, mifanaraka indrindra amin'ny resaka saropady toy ilay olan'ny kolikoly amin'ny fandraharahàna kakaô sy kafe.